မင်းတစေ: အရေခွံငတ်နေသောခန္ဓာ၏အော်သံ ( သို့ ) လူ့အခွင့်အရေး ဘာလည်း၊ ဘယ်လည်း
အရေခွံငတ်နေသောခန္ဓာ၏အော်သံ ( သို့ ) လူ့အခွင့်အရေး ဘာလည်း၊ ဘယ်လည်း
လူအချင်းချင်း သတ်ဖြတ်မှုတွေ၊ နိုင်ထက်စီးနင်းပြုမှုတွေ၊ မတရားဖိနိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေစတဲ့ လူမဆန်တဲ့လုပ်ရပ်တွေကို အတင်းတိုးဝှေ့ကျော်ခွပြီး ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးနေ့ဆိုတဲ့ နေ့တစ်နေ့ကတော့ ၂၀၀၇ ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့မှာ (၅၇)နှစ်မြောက်မွေးနေ့ပွဲကျင်းပဖို့အတွက် ကမ္ဘာမြေပေါ်ကိုထပ်မံ ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြန်ပြီပေါ့။
၁၉၄၈ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁၀)ရက်နေ့မှာ သူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့ကြတယ် ဆိုပေမယ့် ၁၉၅၀ ဒီဇင်ဘာလ (၁၀)ရက် နေ့မှပဲ သူ့မွေးနေ့ပွဲကို တရားဝင်စတင်ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် မွေးနေ့ပွဲကို (၅၇)နှစ်ကြိမ်မြောက် ကျင်းပခြင်းလို့ ခေါ်ဆိုချင်ခေါ်ဆိုနိုင်ပေမယ့် သူ့အသက်အမှန်ကတော့ (၅၉)နှစ် တင်းတင်း ပြည့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာမြေရဲ့ တစ်ဖက်ခြမ်းအမှောင်ထုထဲက ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံခံစားနေရတဲ့ လူပေါင်းများစွာရဲ့ အော်ဟစ်ညည်းညူသံတွေကို လစ်လျှူရှုပြီး ဒီမွေးနေ့ပွဲကြီးကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကျင်းပနေခဲ့မယ်ဆိုရင် သူတရားမှတရားပါ့မလားဆိုတဲ့ သံသယစိတ်တွေဝင်လာနေမိတော့ မွေးနေ့ရှင်တို့ရဲ့ထုံးစံ လာသမျှလူကို ဟန်မပျက်အောင်လိုက်ပြုံးပြနေတာကလွဲလို့ သူ့ဆီမှာ မွေးနေ့ရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ခုန်တက်ကြွမှုမျိုးတွေ ရှိမနေနိုင်တော့ပါဘူး။
အထူးသဖြင့် သူ့ အသက်(၅၉)နှစ်ပြည့်သည်အထိ သူ့နာမည်ကို ယောင်လို့တောင်မကြားဘူးသေးတဲ့ မြန်မာဆိုတဲ့ နိုင်ငံငယ်လေးတစ်ခု ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိနေသေးတယ် ဆိုတဲ့အဖြစ်အပျက်က သူ့ရဲ့မွေးနေ့ပွဲကြီးကို အကြီးအကျယ်အရှက်ရစေခဲ့ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းပါးစပ်က ထွက်မိတယ်ဆိုရင်ပဲ လူတွေကတစ္ဆေသရဲကိုမြင်မိသလို ပြောနေတဲ့လူအနားက ကြောက်လန့်စွာနဲ့ ထွက်ပြေးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလည်းသူတို့အမှားတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မကြာခင် အဲဒီစကားလုံးပြောမိတဲ့လူရဲ့ အနောက်ကို မိစ္ဆာရဲ့အရိပ်လို ကျိန်စာတွေ တစ်ပုံတစ်ခေါင်းကြီး လိုက်ချလာတော့မှာဆိုတော့ သူတို့ပါရောပြီးပါမသွားအောင် ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့ သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်။
အထက်မှာဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ စကားလုံးကို လူသိရှင်ကြားပြောဆိုမိခဲ့တဲ့ လူတိုင်းလိုလို ပြောပြီးမကြာခင်မှာပဲ အကျဉ်းထောင်ဆိုတဲ့ ပစ္စုပ္ပန်ငရဲကြီးထဲကို အရှင်လတ်လတ်သွတ်သွင်းခြင်း ခံခဲ့ရတာတွေများများလာတာနဲ့အမျှ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာလည်း မြန်မာပြည်ရဲ့ အဘိဓါန်မှာ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး စကားလုံးတစ်ခုဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ရင်ခွင်မှာ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ ရင်ခုန်သံတွေ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဆိတ်သုန်းသွားခဲ့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သိခွင့်မရှိတာတွေကိုမှ ပိုသိချင်နေတဲ့ လူသားရဲ့ပြင်းပြထက်သန်တဲ့ စိတ်သဘာဝကို ဘယ်လိုအရာမျိုးကမှ ရေရှည်ဖုန်းကွယ်မထားနိုင်ခဲ့တော့လည်း လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာဘာလည်းဆိုတဲ့ ပဲ့တင်သံတွေ မြန်မာပြည်ရဲ့ နံရံတွေကို တဖန်ပြန်လည်ရိုက်ခတ်လို့လာခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာကြီးက ကမ္ဘာထိပ်သီးခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ မနေနိုင်မထိုင်နိုင် အစည်းအဝေးပွဲတွေ မကြာခဏကျင်းပလို့ရအောင် ခေါင်းစဉ်တပ်လို့ကောင်းတဲ့ အသုံးချခံအရာတစ်ခုလား။
ဒါမှမဟုတ် လက်ရှိအစိုးရကို ကြည့်မရတာနဲ့ လူတွေစုရုံးပြီးဝိုင်းအော်လို့ကောင်းအောင် အတိုက်ခံပါတီတွေက ဆွဆွပေးနေတဲ့ ကျွေးကြော်သံတစ်ခုလား။
ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော်တို့အာရှတိုက်သားတွေနဲ့ အံဝင်မှုလုံးဝမရှိတဲ့ အစမ်းသပ်ခံနိုင်ငံရေးစနစ်သစ်တစ်ခုလား။
အဲဒါတွေကတော့ ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်က လူသန်းပေါင်း(၆၀)လောက် သို့လောသို့လော ထင်နေကြတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးပေါ်မြင်တဲ့ အမြင်တစ်ချို့တစ်ဝက်မျှသာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချို့ကဆို လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာကို နိုင်ငံတွင်းမတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်ပွါးအောင် အနောက်နိုင်ငံက သွတ်သွင်းလာတဲ့ ကျိန်စာတစ်ပုဒ်လို့တောင်မြင်နေကြတဲ့ အထိဖြစ်နေပါတယ်။
မြန်မာပြည်ကလူအတော်များများ လူ့အခွင့်အရေးအပေါ် အဲဒီလိုအမြင်တွေစောင်းနေအောင် ချော့၍တစ်မျိုး၊ ခြောက်၍တစ်ဖုံ၊ အခြေအမြစ်မရှိတဲ့ ၀ါဒဖြန့်နည်းပေါင်းမျိုးစုံ အသုံးပြုပြီး သပ်ရိုက်သွင်းခဲ့ကြတဲ့ လူတစ်စုကတော့ မျက်ဖြူဆိုက်လေ၊ ဆရာကြိုက်လေဆိုသည့်အတိုင်း လူ့အခွင့်အရေးပေါ်ကို လူတွေ အဲဒီလို အမြင်စောင်းလေ သူတို့အကြိုက်တွေ့လေ ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
ဒါဆို လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ တန်ခိုးရှင်တစ်ယောက်ကဖန်ဆင်းပြီး ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ လူတွေသာခံစားစေလို့ မိုးပေါ်ကနေရွေးချယ်ပြစ်ချပေးလိုက်တဲ့ လူတိုင်းနဲ့မဆိုင်တဲ့ မိုးကျရွှေကိုယ်ခံစားခွင့်တစ်ခုသက်သက်ပဲပေါ့။
မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီအပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ အချက်အလက်တွေအားလုံး သွေးထွက်အောင်မှားယွင်းနေတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီး အကြောက်အကန်ငြင်းဆိုပါတယ်။
လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ လွယ်လွယ်နားမလည်နိုင်လောက်အောင် ရှပ်ထွေးပွေလီနေတဲ့ သပွတ်အူဝါဒတစ်ခု လုံးဝမဟုတ်သလို ကြောက်စရာကောင်းလှတဲ့ နိုင်ငံရေးကျိန်စာတစ်ပုဒ်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။
အမှန်တကယ်ကတော့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လူလို့ သိထားကြတဲ့ လူသားတိုင်း မမွေးဖွားခင်ကပဲ ပိုင်ဆိုင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ အလွန်ရိုးရှင်းသော မွေးရာပါလက်ဆောင်မွန် တစ်ခုဆိုတာကလွဲလို့ အခြားဘာအသွင်သဏ္ဌန်တစ်ခုမှ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။
မွေးရာပါလက်ဆောင်မွန်ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ မွေးကတည်းက ကပ်ပြီးပါလာတဲ့ အရေပြားတစ်စုံလိုပဲ လူတိုင်းရဲ့ မွေးရာပါခံစားခွင့်တစ်ခုလို့ ဆိုလိုလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ၀မ်းနည်းစရာက အဲဒီလူသားတိုင်း ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ မွေးရာပါအရေခွံကို လုံး၀၀တ်ဆင်ခွင့်မရှိပဲ မွေးဖွားကြီးပြင်းလာရတဲ့ သနားစရာလူတွေ ဟောဒီကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ ဒုနဲ့ဒေး ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုပါ။ အဲဒီသနားစရာ လူတွေထဲမှာ ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့အပါအ၀င် မြန်မာပြည်သား သန်းပေါင်း(၆၀)လောက်က ရှေ့ဆုံးကပါဝင်နေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကတော့ အဲဒီဝမ်းနည်းစရာကို ခြောက်ခြားစရာတစ်ခုအဖြစ် အသွင်ပြောင်းလဲပြစ်ခဲ့ပါတယ်။
လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်ရက်နဲ့ ကိုယ်ပိုင်အရေခွံလေးတောင် ၀တ်ဆင်ခွင့်မရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ ဘ၀ဟာ သွေးရဲရဲ သံရဲရဲနဲ့ ခြောက်ခြားစွာ အကျည်းတန်လွန်းလှပါတယ်။
အဲဒါကလည်း အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို ကျွန်တော်တို့က အရေပြားမဲ့စွာနဲ့ မွေးဖွားလာခဲ့ခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲ မွေးဖွားခဲ့ပြီးမှ အဲဒီအရေပြားကို ရက်ရက်စက်စက် ချွတ်ယူခြင်းခံလိုက်ရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ ချပ်ချပ်ရပ်ရပ်လှပနေရမယ့် အရေပြားတစ်ခုကို ကိုယ်ပိုင်ဝတ်ဆင်ခွင့်မရတဲ့ လူတွေလောက် လူဖြစ်ရှုံး အော့နှလုံးနာစရာ ကောင်းတဲ့လူရယ်လို့ ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိမနေနိုင်တော့ပါဘူး။ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ အရေပြားမရှိတဲ့ ကိစ္စဟာ လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ အခြားအခြားသော ရှက်စရာကောင်းတာတွေနဲ့ဘယ်လိုမှ နိုင်းယှဉ်လို့မရအောင်ပင် အလွန်ရှက်စရာကောင်းလှတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုလည်းဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီတော့လည်း ကိုယ့်အရေပြားကိုယ်ပြန်လိုချင်တဲ့ လူတွေက "ငါဟာပြန်ပေး ငါဟာပြန်ပေး" ဆိုပြီး မုန့်လုစားခံရတဲ့ ကလေးငယ်တွေလို ငိုယိုပြီးပြန်လည်တောင်းယူမိခဲ့ကြတာပေါ့။
ဒါပေမယ့်ကိုယ့်အရေပြားကိုယ် ပြန်လည်ပိုင်ဆိုင်ဖို့ တရားဝင်တောင်းဆိုမှုတွေကို လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်တဲ့ လက်နက်ကိုင်လူတစ်စုက နိုင်ငံတော်ကိုပုန်ကန်နေပါပြီဆိုပြီး အကြမ်းဖက်နှိပ်နင်းခဲ့လေတော့ လူတွေရဲ့ငိုသံဟာ ခြောက်ခြောက်ကပ်ကပ်နဲ့ ပြန်လည်တိတ်ဆိတ်ခဲ့ရတယ်။
အဲဒီအခါမှာ အဲဒီလိုတောင်းဆိုမိခဲ့တဲ့ လူတွေကိုယ်တိုင်ကတောင် ငါတို့ခန္ဓာပေါ်မှာ အရေပြားတစ်ခုရှိသင့်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် သံသယပြန်ဝင်လာကြတော့တာပါပဲ။ အဲဒီကမှတစ်ဆင့် လူတွေဟာ အရေခွံမရှိတဲ့ ဘ၀ကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ နေသားကျလာခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီလို နေသားကျနေတယ်ဆိုတာကလည်း သက်တောင့်သက်သာ နေသားကျခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲ ပေဖြစ်တော့လည်းခံရတော့မှာပေါ့ဆိုတဲ့ ပေတုံးတစ်တုံးရဲ့ အထုအနှက်ခံဘ၀ကို ကျင့်သားရနေသလို နေသားကျမှုမျိုးပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
ဒါဆို ဘာဖြစ်လို့များ ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ အရေခွံတွေကို အဲဒီလူတစ်စုက အညိုးရမ္မက်ကြီးစွာနဲ့ လိုက်လံခွါယူနေကြတာလည်းလို့ အဖြေရှာကြည့်လိုက်တော့ လယ်ပြင်မှာ လင်းတတွေ အပြုံလိုက်နားနေသလို ထင်ရှားတဲ့ အဖြေတစ်ခုထွက်ပေါ်လို့လာခဲ့ပါတယ်။ တခြားတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့အကျည်းတန်တဲ့ အနာဂါတ်တွေမှာ ပိုမိုလှပစွာဝတ်ဆင်နိုင်ဖို့ လောဘ၀တ်စုံအကြီးကြီးတစ်ခု ကြိုတင်ချုပ်လုပ်ရန်အတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လူတွေအားလုံးပိုင်ဆိုတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတွေအားလုံးကို လူတစ်စုစာပစ္စည်းတွေအဖြစ် အတင်းအဓမ္မ သိမ်းကျုံးယူငင်ပြီး သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတ္တတွေကို အရောင်တွေ တောက်သထက်တောက်အောင် လောဘဆေးတွေ ဆိုးနေကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူတို့တွေ သေချာမတွေးမိတာက ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်အရေပြားနဲ့ချပ်ချပ်ရပ်ရပ်လှပပြီးသား လူတစ်ယောက်ဟာ သွေးသံတွေရဲနေတဲ့ အခြားသူတွေရဲ့အရေခွံတွေကို ထပ်မံဝတ်ဆင်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် ပိုမလှလာတဲ့အပြင် နဂိုရှိရင်းစွဲ အရေခွံရဲ့အလှကိုတောင် ပျက်ပြားသွားစေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပါ။
လူတစ်စုရဲ့ အနာဂါတ်ခန္ဓာကိုယ်တွေပိုမိုလှပအောင်မွမ်းမံဖို့ လူသန်းပေါင်းများစွာရဲ့ အရေခွံတွေကိုလိုက်လံခွါယူနေတဲ့ ကိစ္စဟာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဘယ်လိုမှ အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုမရှိနိုင်တဲ့ စိတ်ဖောက်ပြန်နေတဲ့ဝါဒတစ်ခု သက်သက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အာဏာဂုဏ်မောက်နေတဲ့လူတွေဟာ အမှန်တရားကိုအချိန်မှီပြုပြင်ဖို့ တိုက်တွန်းပြောဆိုချက်တွေကို မသိသလိုလစ်လျှရှုကာ ပေါက်တဲ့နဖူးမထူးတော့ဘူးကွာဆိုပြီး ရှက်ရမ်းတွေဆက်ရမ်းခဲ့ကြပါတယ်။
ငါ့လှေငါထိုး ပဲခူးရောက်ရောက်၊ ငါ့နွားငါကျောင်း ကျောက်ပန်းတောင်းရောက်ရောက်ဇာတ်ခင်းနေကြတဲ့ အဲဒီလူစုဟာ လှေတွေ၊ နွားတွေအားလုံးကို သူတို့ဘိုးဘွားပိုင်ပစ္စည်းတွေအဖြစ် မတရားသတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒါတွေကြောင့်လည်း ယ္ခုလက်ရှိမြန်မာပြည်မှာ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်သူ လက်နက်ကိုင်လူတန်းစား (အရေခွံခွါယူနေသူများ) နဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအချိုးဖောက်ခံကျောမွဲပြည်သူများ (အရေခွံအစိမ်းလတ်လတ်ချွတ်ခံရသူများ) ဆိုပြီးဆန့်ကျင်ဘက်လူတန်းစားနှစ်ရပ် သိသိသာသာကွဲပြားလာခဲ့ပါတယ်။
့ အလွန်အမင်းကြွယ်ဝချမ်းသာမှုနှင့် အဆုံးစွန်ဆင်းရဲမွဲတေမှုတို့ အပြိုင်အဆိုင် ကျောခြင်းယှဉ်ရပ်နေခြင်း လို့ပြောရင်လည်း မမှားပါဘူး။
အဲဒီလို လူတန်းစားကွာဟမှုမျဉ်းကြောင်းကြီး အကျဲဆုံးဖြစ်နေတဲ့ အနေအထားက နိုင်ငံကြီးလုံးဝဥသုန်ပျက်စီးနေတာကို ထင်ရှားစွာ မီးမောင်းထိုးပြနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပထ၀ီမြေပုံပေါ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ သွေးသံရဲရဲနဲ့ အရေခွံမဲ့နေတဲ့ မြန်မာပြည်မြေပုံကြီးကို ပုပ်ရှကွဲအက်နေတဲ့ အနာအိုင်းကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ သွေးပျက်ခြောက်ခြားစွာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
သမိုင်းရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း အရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်တဲ့ အဲဒီလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုကြီးကို မြန်မာ့သမိုင်းရဲ့ အဆိုးရွားဆုံးဆုတ်ကပ်ကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ အရင့်အရင် သမိုင်းတွေမှာ ဖတ်ရှုခဲ့ရတဲ့ ပလိပ်ကပ်လိုဆုပ်ကပ်ကြီးတွေကတောင် လက်မြောက်အရှုံးပေးရလောက်အောင် ယ္ခုလက်ရှိခံစားနေရတဲ့ ဆုတ်ကပ်ကြီးက ဆိုးရွားပြင်းထန်လွန်းနေပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ လူတွေဖန်တီးထားတဲ့ အဲဒီဆုတ်ကပ်ဆိုးကြီးက သဘာဝကဖြစ်လာခဲ့တဲ့ ဆုတ်ကပ်တွေထက် အဆပေါင်းများစွာ လူတွေကို အထိနာစေခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပလိပ်ကပ်ကြီးကျရောက်စဉ်အချိန်အခါက လူတွေဟာ မြို့ရွာအိုးအိမ်တွေကို စွန့်ခွါထွက်ပြေးပြီး ရောဂါကြီးအကင်းသေတဲ့အထိ နိုင်ငံအတွင်း အခြားဘေးလွတ်ရာနေရာတွေမှာ ပုန်းရှောင်ခွင့်ရခဲ့ကြပေမယ့် အာဏာရူးတွေကြောင့် ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရတဲ့ အဲဒီဆုတ်ကပ်ကြီးကတော့ နိုင်ငံတစ်ခုလုံး လှည်းနေလှေအောင်း မြင်းဇောင်းပါမကျန်အောင် ကူးစက်ပျံ့နှံ့နေတဲ့အတွက် သနားစရာလူတွေဟာ ပြေးစရာမြေမရှိတဲ့အပြင် ကုရာနတ္ထိဆေးမရှိလည်း ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့ အနာဂါတ်ကလေးငယ်တွေဟာ ဇာတ်တူသားစားတဲ့ ဟင်္သာကိုးသောင်းထက် အဆပေါင်းများစွာ အော့နှလုံးနာစရာကောင်းလှတဲ့ ဇာတ်တူသားစားတဲ့ လူတွေအကြောင်းကို သမိုင်းဖတ်စာတွေအဖြစ် နောင်တချိန်မှာ ရင်နာနာနဲ့ သင်ယူရကြတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုရှုထောင့်တွေကပဲကြည့်ကြည့် ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒီလူမဆန်တဲ့ အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုကြီးကို သားသတ်ရုံက သွေးပေါင်းစုံစွန်းထင်းနေတဲ့ သားသတ်ဓားတစ်လက်ထက်ပိုပြီး မမြင်နိုင်တော့ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ သွေးညှီနံ့တစ်ခု မပျောက်ခင် နောက်ထပ်သွေးတွေထပ်ထပ်စွန်းနေတဲ့ အဲဒီသားလှီးဓားကြီးရဲ့အောက်မှာ မြန်မာပြည်ရဲ့လူ့အခွင့်အရေး အရေခွံကြီး သွေးဟုန်းဟုန်းတောက်အောင် ခွါယူခြင်းခံခဲ့ရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံသားတိုင်းတူညီတဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်ဆိုင်ရေး၊ နိုင်ငံသားတိုင်း တူညီတဲ့ အခွင့်အရေးရရှိရေး၊ နိုင်ငံသားတိုင်း လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ပြောဆိုခွင့်ရှိရေး အစရှိတဲ့ အခြေခံ အရေပြားကြီး ကာကွယ်ဝတ်ဆင်ခွင့် မရရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အခုဆိုရင် ပညာရေးနိမ့်ကျမှု၊ စီးပွါးရေးချွတ်ခြုံကျမှု၊ နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှု အစရှိတဲ့ ကူးစက်ရောဂါပေါင်းမြောက်များစွာကို ခြောက်ခြောက်ခြားခြားရင်ဆိုင်နေရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ အုပ်ချုပ်သူ အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ ၎င်းတို့နေထိုင်ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ နိုင်ငံတော်ကြီး ရောဂါဘယကင်းစင်ပြီး ကျန်းကျန်းမာမာရှိနေတာကို တကယ်ပဲမြင်ချင်တဲ့ စိတ်စေတနာအမှန် ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီလူ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ မွေးရာပါအရေခွံကြီးကို ပြန်လည်လွမ်းခြုံပေးဖို့ အချိန်တွေသိပ်မနှောင်းသေးပါဘူး။
ဒါနဲ့တောင် အမှန်ကိုမမြင်နိုင်သေးပဲ ဆက်လက်မိုက်တွင်းနက်နေဦးမယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီအကာအကွယ်မဲ့နေတဲ့ သွေးရဲရဲသံရဲရဲ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို တစ်စစီဝါးမြိုစားသောက်တော့မယ့် အမျိုးအမည်ဖော်ပြခြင်းငှာ မစွမ်းသာတဲ့ အခြားသောအခြားသောကူးစက်ရောဂါတွေ အမှောင်ထုတွေထဲကနေ ညာသံပေးချီတက်လာနေပြီ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း အရေခွံငတ်နေတဲ့ လူသားတွေကိုယ်စား ကျွန်တော့်အာခေါင်တွေခြစ်ထုတ်ပြီး ရင်ကွဲနာကျစွာ ဟစ်အော်လိုက်ပါတယ်။
(မှတ်ချက်။ကျွန်တော်တို့ မ၀တ်ဖူးခဲ့တဲ့ အရေခွံကြီးကို မြင်ဖူးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာခင်းကျင်းပြသထားပါတယ်။ မြင်ဖူးပြီးသား လူတွေလည်းစိတ်ကူးနဲ့ ထပ်မံဝတ်ဆင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။)
စိတ်တေလေကို နှိပ်ကွပ်သူ Mintasay at 11:43 AM
သိနိုင်မှာလဲနော်။ အဲလိုဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်နေမှာပဲ။ မျိုးသုန်းမယ့်လက္ခဏာလားတော့မသိပါဘူး။ တွေးတိုင်းရင်လေးရတယ်။ အဲလိုအရေခွံကြီးကိုတို့နိုင်ငံသားတွေမဝေးတော့တဲ့အချိန်
မင်းတစေပြောတာတွေ ဒို့ သိပ်ပြောချင်နေတာ။ ဒို့ ဘလော့မှာ ဗမာစာမမြင်ရလို့ ကြုံတုန်းဒီမှာရေးလိုက်ဦးမယ်။
ဒို့တခြားမှာကျောင်းသွားတက်တုန်းက၊အဲဒီကပါမေါက္ခအားလုံးမြန်မာပြည်ကလာတဲ့အစိုးရအရာရှိဆိုရင်နှိပ်ကွပ်ကြတယ်။ “You are working for your government”. ဆိုတဲ့စကားနဲ့ကိုင်ကိုင်ပေါက်နေတော့ဒို့ လည်းမခံချင်လို့ ပြန်ပြောတာ “ငါအစိုးရကောင်းစားရေးလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး၊ငါ့ပြည်သူတွေစာတတ်ရေးအတွက်စာသင်ပေးနေတာ” လို့ ။“ဒါဆိုကျေးဇူးပြုပြီးမင်းကျောင်းသားတွေကိုလူ့ အခွင့်အရေးအကြောင်း
ဒါနဲ့ ဒို့ လည်း“မင်းတို ငါ့ကိုဂျေးလ်ထဲမှာမြင်ချင်လို့ လား”လို့ ဘဲပြန်မေးနိုင်ခဲ့ပါကြောင်း..။
လူတွေက ကိုယ့်အရေပြားကိုယ်တောင်မမှတ်မိကြတော့ဘူးဗျို့ ။
ကိုမင်းတစေ ပြောတာ မှန်ပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ စကားလေးကို ပြောမိတာနဲ့ ရှောင်မယ့်လူတွေချည်းပါပဲ။ ကိုမင်းတစေ အရေးအသားတွေက ကောင်းလွန်းလို့ ဒီနိုင်ငံမှာ လူလာဖြစ်တဲ့ သဲကိုသဲတောင် သနားမိတယ်။ ဒီလို လူ့အခွင့်အရေးတွေ ရှိတယ်ဆိုတာကို အခြားလူတွေကိုလည်း သိစေချင်လိုက်တာ။
သက်တောင့်သက်သာ မဟုတ်တဲ့ နေသားကျခြင်းမျိုးနဲ့ နေသားကျနေကြတယ်ဆိုတာ သိပ်မှန်တယ်ဗျို့ ။ ဖားဖြည်းဖြည်းချင်း အပြုတ်ခံရတဲ့ ဥပမာလိုပေါ့။ ဖြစ်စဉ်ထဲကနေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခွာကြည့်ရင် ဖက်ဆစ်ခောတ်လိုပဲ တော်တော်ဆိုးတာကိုတွေ့ ရလိမ့်မယ်ဗျာ။ တချို့ ကနေသားကျပြီး နားမလည်ကြဘူးဗျ။ ခုလည်းနေလို့ ဖြစ်သေးဆိုပဲ။ တိုက်ရိုက်မထိသေးယ်ဗျာ။ ဖြည်းဖြည်းချင်းအပြုတ်ခံနေရတာကို မသိကြဘူး။လူတွေ မျက်စေ့ဖွင့်ထားဖို့ လိုတယ်ဗျာ။
ကျေးဇူးပါအစ်ကိုရေ။ အခုမှပဲ ကျွန်တော် အရေပြားမရှိပဲ နေလာတာ အနှစ် နှစ်ဆယ်ကျော်နေမှန်းသိတယ်။ နေတာ ကြာလို့လားတော့မသိဘူး ကိုယ့်ဟာကိုယ်တော့ အဆင်ကိုပြေလို့။ အရေပြား ပြန်ရရင်တောင် ၀တ်လို့ အသားကျပါတော့မလား မသိဘူး။ အရေပြားကို ယူထားခံရတဲ့ အကြောင်းကို လူတွေသိဖို့လိုတယ်ဗျ။ အဲဒါမှ ကိုယ့်အရေပြား ကို ကိုယ်ပြန်တောင်းလာချင် ကြမှာ။
လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်ရက်နဲ့ ကိုယ်ပိုင်အရေခွံလေးတောင် ၀တ်ဆင်ခွင့်မရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ ဘ၀ဟာ သွေးရဲရဲ သံရဲရဲနဲ့ ခြောက်ခြားစွာ အကျည်းတန်လွန်းလှပါတယ်။ So pity lives inside Myanmar :(
ဒီအရေခွံကို ဒီအသက် 30အရွယ်ထိ ပထမဆုံးမြင်ဖူးတာကလဲ ဒီဘလော့မှာရဲ့ ပထမဆုံးပို့စ်မှာပဲ မင်းတစေရေ။
ကိုမင်းတစေ…၊ ဒီဆောင်းပါးလေးကို တခြားမှာလဲ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပါစေချင်တယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် တခြား ဂျာနယ် တခုခုကိုလဲ ပို့စေချင်ပါတယ်။ ကိုယ့်အားထုတ်မှုကို လူတွေများများ ပိုဖတ်သွားရတာပေါ့။ အနည်းဆုံးတော့ ကျနော်တို့ ပြောချင်တဲ့ စကားတွေ၊ ကျနော်တို့ ခံစားချက်တွေကို လူတွေ ပိုသိသွားရတာပေါ့။ :)
Hello MMy dear brother,
I'm really glad for youe opinions and blog. We have to do for our people and land.upasaka969
ကိုမင်းတစေရေ...လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းကို မြန်မာလို လိုချင်နေတာနဲ့အတော်ပဲဗျာ။ ကိုယ့်ဟာကို ဘာသာပြန်ရမှာလည်း ပျင်းနေတာဗျ။ ကျေးဇူးကမ္ဘာပါ။
မင်းတစေရေ..လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ အရေပြားလိုတွဲပါနေတာလို့ တခါမှ မစဉ်းစားမိခဲ့ဖူးဘူး။ ဖတ်ရင်းနဲ့ ကြက်သီးထရပါတယ်။ အမလည်း RFA ပညာရေးထဲမှာ ပညာသင်ခွင့်ကိုပြောရင်းနဲ့ အဲဒီအပိုဒ်တွေကို ၃ပတ်ဆက်ပြောဖူးတယ်။ အဲဒီမှာ ပြည်တွင်းက သူငယ်ချင်းဆရာမတွေက သူတို့ဘ၀မှာ ဒါတွေဟာ ရရမယ့်အခွင့်အရေးလို့ ဘယ်တုန်းကမှ မထင်ခဲ့ပါဘူးတဲ့။ အမလည်း ကလိုစေးထူးပြောသလိုပဲ တခြားမီဒီယာတခုခုကိုပါ ပေးစေချင်ပါတယ်။